လီဗာပူး ဖန်တွေရဲ့ သီချင်းကို ၊ လှောင်ပြောင် စပ်ဆိုမှုကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မန်စီးတီး — Sports Myanmar
လီဗာပူး ဖန်တွေရဲ့ သီချင်းကို ၊ လှောင်ပြောင် စပ်ဆိုမှုကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မန်စီးတီး
မန်စီးတီး အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကြီးကို ဆွတ်ခူးအပြီး ၊ အောင်ပွဲ ခံကြစဉ်မှာ လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ နာမည်ကျော် သီချင်း Allez Allez Allez ကို လှောင်ပြောင် သီဆိုခဲ့မှုကြောင့် ဝေဖန်မှု အများအပြား နဲ့ ရင်ဆိုင်ရလျှက် ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီလို အဲဖွဲ့လိုက် သီဆိုနေတဲ့ Video ဟာ အင်တာနက်ပေါ် ပျံ့နှံလာခဲ့ပြီးနောက် အခုလို ဝေဖန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းတွေ အရတော့ သီဆိုခဲ့တဲ့ သူတွေဟာ စီနီယာ အသင်းကြီး ကစားသမားတွေ လို့ သိရပြီး ၊ လေယာဉ်ပျံ ပေါ်မှာ သီဆိုခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ လို သီဆိုချိန်မှာတော့ Allez Allez Allez ရဲ့ သံဇဉ်ကို ယူပြီး ” ကိဗ် ကို သွားခဲ့ရပေမယ့် ၊ အရှုံးကို ရင်ဝယ်ပိုက် ပြန်လာခဲ့ရတယ်” ” ကွန်ပနီ ကြောင့် ဆာလတ်ကြီး ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့တာလေ” ” ဖြစ်လိုက်ရင် အခံဘက်ကချည်းပဲ” ” သူတို့ ပရိသတ်တွေဆိုရင် ဆုဖလား နဲ့ လွဲချော်တာ များလို့ ၊ ပွဲကြည့်စဉ်ပေါ်မှာ ငိုနေခဲ့ပေါင်း များပြီ” စတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရတဲ့ စာသားတွေကို ထည့်သွင်း သီဆိုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Manchester City’s Spanish manager Pep Guardiola (C), Manchester City assistant coach Mikel Arteta (R) and Manchester City’s Belgian defender Vincent Kompany (L) show the Premier League trophy to supporters outside the Etihad Stadium in Manchester, northern England on May 12, 2019. – Manchester City held offatitanic challenge from Liverpool to become the first side inadecade to retain the Premier League on Sunday by coming from behind to beat Brighton 4-1 on Sunday. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
အဲဒီ Video နဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းသမားတွေကို မန်စီးတီး အနေနဲ့ ဘယ်လို မှတ်ချက်ပေးချင်လဲလို့ မေးမြန်းရာမှာတော့ ကလပ် အသင်းဘက်က တုန့်ပြန်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ အွန်လိုင်း သုံးစွဲသူ အချို့နဲ့ လီဗာပူး ပရိသတ်တွေက ” ဒီလို သီဆိုမှုကို ပရိသတ်တွေက လုပ်ခဲ့တာဆိုရင် ၊ တစ်ဖက် နဲ့ တစ်ဖက် လှောင်ပြောင်ကြတာမျိုး ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ပရို ကစားသမားတွေက သီဆိုတာတော့ တော်တော်ကို ရှက်ဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်” မှတ်ချက် ပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။
အခြား တစ်ယောက် ကတော့ ” မန်စီးတီး အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုကို ငွေနဲ့ တည်ဆောက်လို့ ရချင် ရနိုင်ပေမယ့် ၊ အဆင့်အတန်းကို တည်ဆောက်လို့ မရဘူး ဆိုတာ ဒီ Video က သက်သေပဲ လို့ ” ပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။
လီဗာပူး ဖနျတှရေဲ့ သီခငျြးကို ၊ လှောငျပွောငျ စပျဆိုမှုကွောငျ့ ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ မနျစီးတီး
မနျစီးတီး အသငျးရဲ့ ကစားသမားတှဟော ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားကွီးကို ဆှတျခူးအပွီး ၊ အောငျပှဲ ခံကွစဉျမှာ လီဗာပူး ပရိသတျတှေ နာမညျကြျော သီခငျြး Allez Allez Allez ကို လှောငျပွောငျ သီဆိုခဲ့မှုကွောငျ့ ဝဖေနျမှု အမြားအပွား နဲ့ ရငျဆိုငျရလြှကျ ရှိနပေါတယျ။
အဲဒီလို အဲဖှဲ့လိုကျ သီဆိုနတေဲ့ Video ဟာ အငျတာနကျပျေါ ပြံ့နှံလာခဲ့ပွီးနောကျ အခုလို ဝဖေနျမှုတှေ ဖွဈပျေါလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
သတငျးတှေ အရတော့ သီဆိုခဲ့တဲ့ သူတှဟော စီနီယာ အသငျးကွီး ကစားသမားတှေ လို့ သိရပွီး ၊ လယောဉျပြံ ပျေါမှာ သီဆိုခဲ့တာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အဲဒီ လို သီဆိုခြိနျမှာတော့ Allez Allez Allez ရဲ့ သံဇဉျကို ယူပွီး ” ကိဗျ ကို သှားခဲ့ရပမေယျ့ ၊ အရှုံးကို ရငျဝယျပိုကျ ပွနျလာခဲ့ရတယျ” ” ကှနျပနီ ကွောငျ့ ဆာလတျကွီး ဒဏျရာ ရသှားခဲ့တာလေ” ” ဖွဈလိုကျရငျ အခံဘကျကခညျြးပဲ” ” သူတို့ ပရိသတျတှဆေိုရငျ ဆုဖလား နဲ့ လှဲခြျောတာ မြားလို့ ၊ ပှဲကွညျ့စဉျပျေါမှာ ငိုနခေဲ့ပေါငျး မြားပွီ” စတဲ့ အဓိပ်ပါယျ ရတဲ့ စာသားတှကေို ထညျ့သှငျး သီဆိုခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ Video နဲ့ ပတျသကျလို့ သတငျးသမားတှကေို မနျစီးတီး အနနေဲ့ ဘယျလို မှတျခကျြပေးခငျြလဲလို့ မေးမွနျးရာမှာတော့ ကလပျ အသငျးဘကျက တုနျ့ပွနျခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။
တဈဆကျတညျးမှာပဲ အှနျလိုငျး သုံးစှဲသူ အခြို့နဲ့ လီဗာပူး ပရိသတျတှကေ ” ဒီလို သီဆိုမှုကို ပရိသတျတှကေ လုပျခဲ့တာဆိုရငျ ၊ တဈဖကျ နဲ့ တဈဖကျ လှောငျပွောငျကွတာမြိုး ဖွဈပမေယျ့ ၊ ပရို ကစားသမားတှကေ သီဆိုတာတော့ တျောတျောကို ရှကျဖို့ ကောငျးလှနျးပါတယျ” မှတျခကျြ ပေးသှားခဲ့ ပါတယျ။
အခွား တဈယောကျ ကတော့ ” မနျစီးတီး အနနေဲ့ အောငျမွငျမှုကို ငှနေဲ့ တညျဆောကျလို့ ရခငျြ ရနိုငျပမေယျ့ ၊ အဆငျ့အတနျးကို တညျဆောကျလို့ မရဘူး ဆိုတာ ဒီ Video က သကျသပေဲ လို့ ” ပွောဆိုသှားခဲ့ ပါတယျ။